ငယ် – Grab Love Story
မိန်းမရဲ့ အဖုတ်လေးထဲ ဆောင့်ချက် ပြင်းပြင်းတွေနဲ့ ဝင်နေတဲ့ လီးကြီးကို ကြည့်ပြီး စိတ်ထဲ ကျေနပ် အားရနေတယ်။ သိပ်လိုချင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော် ရနေပြီ။
လုပ်ချင်ပြီဆိုရင် စနစ်တကျ ၊ သေချာပြင်ဆင်ပြီး ဖြစ်အောင် လုပ်လေ့ရှိတဲ့ အတိုင်း မိန်းမကို နားလည်အောင် ပြောပြ၊ သူလက်ခံတော့ လူရှာ၊ ၂ ယောက်လုံး သဘောကျတဲ့သူကို ရွေး။
အပြန်အလှန် သဘောတူညီမှုယူ။ လိုအပ်တဲ့ ဆေးစစ်မှုတွေ လုပ်ခိုင်း၊ မိန်းမ အဆင်ပြေတဲ့ ရက်ကို သေချာရွေးပြီးမှ ဒီလို နေ့မျိုးကို ရောက်လာခဲ့တာပါ။
လိုးဆောင့်ချက် ကြမ်းကြမ်းတွေနဲ့ မိန်းမလေး အလိုးခံနေရပြီ။ တအင်းအင်း … နဲ့ အံလေးကြိတ်ပြီး ခံစားနေရရှာတယ်။
မိန်းမ မျက်နှာမှာ ဖြစ်နေတဲ့ အမူအရာနဲ့ ထွက်နေတဲ့ အသံ၊အလိုးခံနေရတဲ့ မိန်းမတကိုယ်လုံးကို ပြန်မြင်နေရတယ်။nမိုက်တယ်ဗျာ ကြည့်ရတာ……..
တခါတခါ လှမ်းကြည့်တဲ့ မိန်းမရဲ့ အကြည့်တွေမှာ အားနာမှု ကျေးဇူးတင်မှု၊ မချိတင်ကဲ ခံစားရမှု။ အားရမှု .. တွေပါတဲ့ တွေဟာ ကျွန်တော့် စိတ်ကို အရမ်းကြွစေတယ်။
ပုံမှန်ဆို ကျွန်တော့်လိင်တံတောင့်တင်း ဖို့ကို တော်တော် ကြိုးစားယူရပါတယ်။ ပြည့်ပြည့်၀၀ တောင်မတ်တာမျိုး မရှိပဲ၊ ပျော့နေတတ်တယ်။ အခုတော့ ကျွန်တော့် လိင်တံဟာ အခါတိုင်းတွေနဲ့ မတူပဲ တောင့်တင်းထောင်မတ်လို့ နေတာများ.. ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် အံ့သြမိပါရဲ့။
မိန်းမကို လိုးနေတဲ့ တစ်ယောက်ကို ကြည့်တော့ သူအလုပ်ကို သူလုပ်နေတယ်။ ဘယ်လိုအချိန်မှာ ဘာလုပ်၊ ဘာပြီး ဘာလုပ် ဆိုတာကို သိနေတယ်။ မျက်နှာက မတည်လွန်း မပျော့လွန်းနဲ့ သူ့ပုံစံဟာ ဆန်နေသလိုပဲ။ သူ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ နောက် တစ်ခုကို ပြောင်းလိုက်တယ်။
သူက ပက်လက်လှန်ပြီး လှဲချလိုက်တယ်။ စင်းပြီး ဖြောင့်နေတဲ့ သူ့လီးကြီးဟာ အပေါ်ကို မတ်ပြီး အကျောတွေ ထောင်နေတယ်။ မိန်းမ သူ့အပေါ်ကို တက်ခွပြီးထိုင်ချလိုက်ချိန် အဖုတ်ထဲ လီးကြီး ဝင်သွားတာကို အနီးကပ်ကြည့်ရတဲ့ ဖီလင်ဟာ ကျွန်တော့်အတွက် စကားလုံးမရှိပါဘူး။ အဖုတ်လေးဟာ ပြည့်နေအောင် စို့ထိုးထားသလို ဖြစ်နေတဲ့ လီးကြီးနဲ့ လိုက်ဖက်လွန်းလှတယ်။
ခါး အသာလှုပ်ရုံလေးနဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို မိန်းမက စတယ်။ အသစ်ကို အနေအထား အံဝင်အောင် ထိန်းညှိနေတယ်။
လက်ကို ဟိုလူ့ ရင်ဘတ်ပေါ် အသာထောက် အားပြု၊ တကိုယ်လုံး ထိုင်ထလုပ်နေတာမျိုး မဟုတ်ပဲ ခါးနဲ့ တင်ပါးကိုပဲ လှုပ်ပြီး အဖုတ်ထဲကို လီးကြီး ဝင်အောင် ဖိချပြီး လိုးနေတယ့် မိန်းမရဲ့ တကိုယ်လုံးကို ပြန်မြင်နေရတယ်။ဖြေးဖြေးချင်း အရှိန် ရလာတယ်။
တင်ပါးကို နောက်ကော့၊ အဖုတ်လေးကို အပြင်ကို ကားနေအောင် ဖွင့်ပြီး လီးကြီးပေါ် ထိုင်ပြီး ကျိတ်ကျိတ် ဆောင့်နေတာများ၊ ကြည့်ရတတဲ့ ကျွန်တော့် စိတ်မှာ အားရခြင်း၊ ကျေနပ်ခြင်းတွေနဲ့ပေ့ါ။
ငယ်က အပေါ်ကနေထိုင်ဆောင့်နေတာ အသာ အရှိန်လျော့ပြီး ကျွန်တော့်ကို သူ့နား ခေါ်တယ်။ ငယ့် ညာဖက်ကို သွား မတ်တပ်ရပ်လိုက်တော့ ငယ်ရဲ့ လက်က ကျွန်တော့် ဒုတ်ကို ဖွဖွ ဆုပ်ကိုင်ပါတယ်။ ရှေ့နောက် အသာ ဆွဲပြီး ထုပေးပါတယ်။ ခါတိုင်းနဲ့ မတူ ပိုပြီး တောင့်တင်းမာနေတဲ့ ကျွန်တော့်ကောင်ရဲ့ အတွေ့ကြောင့်
ငယ်က ကျွန်တော့်မျက်နှာ အသာလှမ်းကြည့်တယ်။
မြင်းစီးနေရင်း ကျွန်တော့်ကို ဂွင်းထုပေးနေတဲ့ ကျွန်တော့်မိန်းမလေး။ ဆံပင် ခပ်ဝဲဝဲကို ဘယ်ညာ အသာ ခေါင်းလေး ခါခါပြီး အပေးကောင်းကောင်းနဲ့ လိုးနေတယ့် မိန်းမ၊ အသံ ခပ်အုပ်အုပ်ကလေးနဲ့ အံကြိတ်ပြီး လိုးခံနေတဲ့ မိန်းမ ဟာ ကျွန်တော် သိပ်လိုချင် ခံစားချင်ခဲ့တဲ့ တစ်ယောက်သာ တစ်ယောက်အပေါ် ပေးနိုင်တဲ့ အကျေနပ်စေနိုင်ဆုံးတွေ ပေးနေတာပါ။ ကျေးဇူးပါ မိန်းမရယ်။
ထုပေးတဲ့ အရျှိန် မြန်လာသလို၊ ဆောင့်ဆောင့်ချနေတယ့် ငယ့်ရဲ့ ကိုယ်ဟာလည်း ပိုအားပါပါလာတယ်။
ကိုယ်ခန္ဓာ ဆောင့်လိုက်တိုင်း လှုပ်နေတဲ့ နို့ ၂ လုံးဟာ စည်းချက်နဲ့အတူ ခုန်ပေါက်နေတယ်။
ငယ်ဟာ ကျေကျေနပ်နပ်နဲ့ကို အလိုးခံနေတာပါ။ သူ့မျက်လုံးတွေမှာ မြင်နေရပြီ။ ယောင်္ကျားရှေ့မှာ တခြားတစ်ယောက်နဲ့ အလိုးခံပြီး ကိုယ့်ယောကျာင်္းကို ကျေနပ်စေတဲ့ တကယ့် တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကို သူသွင်းလို့ ရသွားပြီ။
” ပုံစံပြောင်းရအောင်.”… ငယ့်ကို လေးဘက်ထောက်ခိုင်းတယ်။
ခါးကို အသာလျော့ ၊ ဒူးကို အနေတော် ထား၊ တင်ကို အနောက်ကို ကားဖွင့်ပြီး ပစ်ထားပေးလိုက်တယ်။ ငယ့်အဖုတ်ဟာ ဖောင်းအာပြီး အနောက်ကို ပြူနေမှာပါ။
အနောက်ဖက် တချက်လှည့်ကြည့်တော့ အဲဒိ ကိုလေးဟာလေ၊ သူ ဒါကို တော်တော် သဘောကျနေ….
ကိုလူစိမ်းရဲ့ ဒုတ်ကို သုံး လေး ချက် လောက် ထုပြီး ငယ့်အဖုတ်ကို တေ့ပေးတယ်လေ။ မိန်းမကို ကိုယ်တိုင် ဒုတ်ကိုင်ထည့်ပေးတဲ့ စစ်စစ်ကြီး။
ငယ် ကြိုက်ပါတယ်။ ခပ်ရဲရဲ ခံယူရတယ့် ပုံစံမျိုးလို့ ခံစားရတယ်။ အနောက်ကို ပြန်ပြန်ဆောင့်ပေးလို့ရတော့..ပိုပြီး ထိထိမိမိ ရှိတာကိုလည်း ကြိုက်တယ်။ ကိုယ်လုံးအလှ မြင်ရတာမို့ ယောင်္ကျားတွေ လည်းသဘောကျတယ်လို့ ကို ပြောဖူးတယ်။
ခပ်မှန်မှန်လေး အဝင်အထွက် လုပ်ပေးနေတယ်။ ဝင်လာတာ၊ ပြန်ထွက်သွားတာ၊ အတွင်းနံရံတွေ ပွတ်တိုက်သွားတာ၊ အားလုံးကို သေချာသိနေတယ်။ ဒီလို ဖြေးဖြေးမှန်မှန် နဲ့ နေရတာ တမျိုးခံလို့ ကောင်းတယ်။
ကို ငယ့် ခေါင်းရင်းနားကို လာထိုင်တယ်။ နားနား ကပ်ပြီး တိုးတိုး ပြောတယ်။ အသံ ခပ်ကျိတ်ကျိတ် နဲ့ လင်မယား ၂ ယောက် ပြောနေကြတယ်။
” ကောင်းလား ငယ် “
“ငယ် ဘယ်လို ခံစားရလည်း ဆိုတာ ကြားချင်တာ”
“အော် ဟုတ်တယ် ၊ ကိုယ့်မိန်းမ ကိုယ် တခြားတစ်ယောက်နဲ့ လွတ်ပေး၊ ကိုယ်တိုင် ဒုတ်ကိုင်ပြီး ထည့်ပေးတယ့် လူကြီး.. ဒုတ်ကြိးကြိးနဲ့ အထည့်ခံရမှတော့ ကောင်းတာပေ့ါ ရှင် ကျမ ကို ဇာတ်သွင်းလိုက်တာလေ။
ရှင်နဲ့ တုန်းကထက် ပိုခံလို့ ကောင်းတယ်။ သိလား… ကဲ ..ဟုတ်တယ်….””
” အား.. ငယ်ရယ် အဲလို ကြားရတာ ကောင်းလိုက်တာ…. ကိုယ် တအား တောင်လာပြီ…..အား…..”‘
ငယ်သိတယ်.. ကို့ကို အဲလို ပြောပေးရင် သူ ပို စိတ်လာတယ်။ တောင်လာတဲ့ ကို့ဒုတ်ကို ခပ်သွက်သွက်ထုပေးနေလိုက်တယ်။
ကိုက ငယ့်နောက်ကို အသာကျော်ကြည့်ပြီး တိုးတိုး ထပ်ပြောတယ်။
” ငယ့် ဖင်နဲ့ ကိုယ်လုံးတွေ၊ ကားနေတယ့် ပေါင်တံတွေ ကြည့်ပြီး
ဟိုလူ ငယ့်ကို တကယ် စိတ်ပါနေတယ် ထင်တယ်””
အဲလိုလဲ ကြားရော ဒီတခါ စိတ်ထဲ တင်းခနဲ ဖြစ်သွားတာ ငယ်ကိုယ်တိုင်ပါ။ ချက်ချင်းဆိုသလို အထဲမှာ ရွှဲတက်လာတယ်။ သူလည်း သိပုံရတယ်။ ဆောင့်ချက်တွေ ပိုမြန်လာတယ်။
ငယ့်ခါးကို ကိုင်ပြီး ပိုင်ပိုင် နိုင်နိုင် သူလိုးပြီ။ လေးဖက်ထောက်ထားတဲ့ ငယ် …ရှေ့လက်နှစ်ဖက် မခိုင်တော့ပဲ အိပ်ယာပေါ် ခေါင်းကျသွားတယ်။ အဲလို မှောက်ကျသွားမှ အနောက်ကို ပိုကော့ပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားပြီး..
သူ့ရဲ့ လီးဟာ အထဲကို ဆောင့်ဆောင့်ပြိး….လိုးတယ်။
“အ အ …အိုး…”
ထိန်းထားတဲ့ ကြားက ငယ် အသံတွေ ထွက်မိရတော့တယ်။ ဆောင့်ရင်း ဘယ်ညာ ယိမ်းပေးတော့ အထဲမှာ နေရာမလပ်ပေါ့။
“‘ အ… …အား…
ကောင်းတယ်… ကောင်းတယ် ရှင်ရယ်..”
“ဆောင့်ပေးပါ…. အဲလိုလေး…. ဖိဖိပြိးဆောင့်…”
ငယ်ကိုယ်တိုင်လည်း … အနောက်ကို ပြန်ပြန်ပြိး ဆောင့်ပေးမိတယ်။ ကိုလူစိမ်း ဆီကလည်း အဟင်းဟင်းနဲ့အသံတွေ ထွက်လာတယ်။
ကိုက ငယ်တို့ကို ကြည့်ရင်း အံကြီး ကြိတ်ပြီး ဂွင်းထုနေတယ်။ အခန်းထဲမှာ ခပ်အုပ်အုပ် အသားချင်း ရိုက်မိသံနဲ့၊ တအင်းအင်း ညည်းနေကြတယ့် လူ ၃ ယောက်ဟာ တခုခုဆီကို လုံ့လပြု အားတင်း.. အရောက်သွားနေကြတယ်။
“အား…. ကောင်းလိုက်တာ… နာနာလေး..ဆောင့်ပါ ပြိးချင်ပြီ “
” အ …. အ.. ..အား….” ဆိုတယ့် ကိုလူစိမ်းဆီက အသံနဲ့ ငယ့်အထဲမှာ နွေးကနဲ အတွေ့မှာ..
” ပြီးပြီ. ငယ် ပြီးပြီ…အား…..” ကောင်းလိုက်တာ…ပြိုင်တူ ပြီးရတာ.။ သူက အသာ ဆက်ဆောင့်ပေးနေတုန်း..။ ငယ့် အဖုတ်ထဲမှာ တဖြေးဖြေး အရည်တွေ ပြည့်ပြည့်လာနေတာ ခံစားရတယ်။
သူ့ဒုတ်ကို အသာ ဆွဲထုတ်သွားတယ့် အသိ၊ ” ဝင်တော့…” ဆိုတယ့် အသံကို ကြားရတယ်။
ကို့လီးက လေးဖက်ထောက်နေဆဲ ငယ့်အဖုတ်ထဲကို ဝင်လာတယ်။ မှုန်ယိုနေတဲ့ ဆင်လို ကြမ်းတော့တာပဲ။
အရမ်းး ကြမ်းတယ်… ကို့ဆောင့်ချက်တွေ။
” အား…ငယ့်အထဲမှာ အရည်တွေ ရွဲနေတယ်.”
သိပ်အားပါတဲ့ ကို့ဆောင့်ချက်တွေကို အသာညှစ်ပြီး ကြိုပေးမိတယ်။
” အ အ.. အား..” ကို့ အရည်တွေ အထဲကို ပန်းဝင်လာတယ်။ ကိုဟာ တအင်းအင်းနဲ့ ကျေနပ်စွာ ပြီးဆုံးချင်းကို ခံစားနေတယ်။
အထဲမှာ သူတို့ ၂ ယောက်ရဲ့ အရည်တွေ ရောကုန်ပြီ။
လင်မယား ၂ ယောက် အိပ်ယာပေါ် အသာလှဲချမလို့ လုပ်တုန်း တံခါး ပြန်ပိတ်သံ ကြားလိုက်ရတယ်။
ကိုလူစိမ်း သူ့အခန်းကို သူပြန်တာ။
အိပ်ယာပေါ် ကို့ရင်ခွင်ထဲ ဝင်တော့…. ကိုက ငယ့်နဖူးကို အသာနမ်းတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်… ငယ်လေးရယ် တဲ့။ ကျေနပ်ခြင်း..၊ ပျော်ရွင်ခြင်းတွေနဲ့ ကို့ မျက်ဝန်းတွေဟာ အရည်လဲ့နေတယ်။ အမောဖြေရင်း ကို့ မျက်နှာကို ကြည့်နေမိတယ်။
ငယ်ခံစားချက်လား… ဟုတ်ကဲ့… ကြိုက်ပါတယ်၊ ပထမတော့ နည်းနည်း ရှိုးတိုးရှန့်တန့် ဆိုပေမယ့် လိင်စိတ်ဝင်သွားတဲ့ အချိန်မှာ အဲလို ကိုယ့်ယောကျာင်္းရှေ့မှာပဲ နေပြရတာကိုက ခံစားမှု တမျိုး။ ဒုတ် ကြီးကြီးနဲ့ အလုပ်ခံရတော့ ပိုအားရတယ်။ ကို စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားပေးလိုက်နိုင်တဲ့ အတွက်လည်း စိတ်ထဲ ကြည်နူးရတယ်။ လူမှုရေး ရှ့ထောင့်က ကြည့်ရင်ရော၊ ကိုယ့် ယောကျာင်္းတစ်ယောက်လုံးက တောင်းဆိုတာပဲ။
စိတ်ထဲမှာ အားရတယ် ဆိုတာ ခံစားမှု သက်သက်ပါ။ ကို့ကို ချစ်တဲ့စိတ်၊ မြတ်နိုးတဲ့ စိတ် အဲဒါတွေက အရင်ထက်တောင် ပိုတိုးလာပါသေးတယ်။
ငယ် နဲ့ ကိုနဲ့ ဒီကိစ္စ စစီစဉ်တုန်းက ကိုပြောထားတာလေး သတိရတယ်။ မှားတယ် မှန်တယ် ဆိုတာ ကြည့်တဲ့ အမြင်ပေါ် မူတည်တယ်တဲ့။ ဟုတ်တယ်… ငယ်လေး သဘောတူတယ်။
“””တူညီတဲ့ ရှု့ထောင့်က ကြည့်ရင် အဖြစ်အပျက်တိုင်းဟာ မှန်တယ်လေ…””